Jurgen Klopp oo farxad galiyay jamaahiirta Liverpool ee loo sheegay in Sadio Mane uu maqnaan doono kulamada ugu horreeya fasal ciyaareedka bilaaban doona. – Gool FM
(England) 22 Luulyo 2019. Tababare Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay in Sadio Mane uu xilli hore kusoo laabanayo kooxda isla markaana aysan jirin cabsi badan oo ay ka qabaan inuu seego kulamada ugu horreeya fasal ciyaareedka bilaaban doona.
Weeraryahanka reer Senegal ayaa si niyad jab ah ku dhameystay koobka qaramada qaaradda Africa kadib markii ay 1-0 qasaaro ah final-kii kala kulmeen Algeria, waxaana la siiyay waqti yar uu kaga nasto waajibaadka qaranka ka hor inta uusan kusoo laaban kooxda.
Jurgen Klopp wuxuu xaqiijiyay in Sadio Mane uu seegi doono kulanka ay Community Shield-ka la ciyaari doonaan Manchester City, labada kooxood ee ugu sarreeyay fasalkii lasoo dhaafay Premier League ayaana ku kulmi doona Wembley 4-ta August.
Kadibna wuxuu tartan u gali doonaa sidii uu ugu diyaar garoobi lahaa kulanka furitaanka horyaalka oo ay la ciyaari doonaan Norwich City kulan ka dhici doona Anfield, halka shan maalmood kadib ay Istanbul kula ciyaari doonaan Chelsea final-ka UEFA Super Cup.
“Wuxuu ku jiraa qaab fiican” ayuu yiri Jurgen.
“Sida cad waxey u dabaal dagayaan Senegal, waana ku faraxsanahay arintaas sababtoo ah waxey muujineysaa iney xushmad u muujiyeen tartanka isla markaana ay kaalinta labaad u arkeen guul, waana wax fiican” ayuu mar kale yiri macalinka reer Jarmal.
“Hadda fasax ayuu ku jiraa, ma noqon doono mid dheer, wuxuu soo laaban doonaa 5-ta August, kadib kulanka Man City, taasoo ka dhigan inuu heysto laba isbuuc”
“Wuxuu heystaa afar ilaa shan maalmood uu isugu diyaariyo kulanka Norwich City iyo 10-maalmood oo uu isugu diyaariyo final-ka UEFA Super Cup”
Alisson Becker, Roberto Firmino & Mohamed Salah ayaa xilli hore soo laaban kara maadaama Copa America uu dhamaaday xilli hore, sidoo kalana Salah waqti hore laga soo reebay koobka qaramada qaaradda Africa.
Matuidi oo isku diyaarinaya inuu ka tago Juventus & saddex kooxood ay ka mid tahay Man United oo doonaya inay la saxiixdaan